Seychelles Reclaims Award: Top Island Destination any Afrika sy Moyen Orient
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles Reclaims Award: Top Island Destination any Afrika sy Moyen Orient
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Seychelles Travel + Fialam-boly
Seychelles dia nandresy ny fifaninanana indray rehefa nilatsaka fanindroany izy, ny Travel + Leisure 2021 Loka tsara indrindra eran-tany ho an'ny nosy ambony sy ny Moyen Orient.
Mpamaky Travel + Leisure iray no namaritra an'i Seychelles ho “fahagagana fahavalo eran'izao tontolo izao.”
Nipoitra tampoka teo amin'ny sokajy misy azy io toerana io, nahazo isa 88.
Ny Seychelles dia fanta-daza amin'ny tranokala voajanahary voatahiry tanteraka toa ny Vallée de Mai, iray amin'ireo tranokala UNESCO lova eran-tany 115-nosy atokana ho an'ny zanak'olombelona.
Famoahana ny laharana 1 (izay notazoniny ihany koa tamin'ny taona 2019), Seychelles, paradisa madio tsy misy fangarony napetraka tao amin'ny Ranomasimbe Indianina, ary “ny fahagagana fahavalo eran'izao tontolo izao” satria mpamaky iray Travel + Leisure no nampiavaka azy, nidera azy noho ny “hatsarany , ”Nipoitra tampoka tamin'ny sokajy nisy azy, nahazo isa 88, ary narahin'i Zanzibar sy i Maorisy tamin'ny laharana faharoa sy fahatelo.
Ny fitsangatsanganana amin'ity taona ity dia efa niparitaka lavitra hatrizay, hoy ny gazety, nanambara ny valin'ny fanadihadiana izay ahafahan'ny mpamaky misaintsaina ny zavatra niainany nandritra ny dia nataony, ary manome sosokevitra fankasitrahana vaovao ho an'ireo toerana izay manome hatsarana voajanahary tsy manam-paharoa ary, amin'ny toerana maro, vitsy kokoa vahoaka. Matetika ireo manome voninahitra ireo loka dia manome aingam-panahy ireo mpandeha rehefa mitady ny traikefa mahafa-po indrindra eran'izao tontolo izao izy ireo.
Mirehareha amin'ny zavamaniry tropikaly maitso, morontsiraka misy vovoka fotsy, toerana mahafinaritra sy hafahafa ary rano mangatsiaka mazava, ny Seychelles fanta-daza ihany koa amin'ny tranokala voajanahary voatahiry tanteraka toa ny Vallée de Mai, iray amin'ireo vatan'ny nosy 115-nosy roa UNESCO lova natokana ho an'ny zanak'olombelona, ​​ny zavamaniry sy ny biby ary ny valan-dranomasina an-dranomasina, izay nahasarika ny Travel & Mpamaky ny fialam-boly.
Maneho hevitra momba ny loka, Ramatoa Bernadette Willemin, Tale Jeneralin'ny Marketing an'ny Seychelles fizahan-tany dia nilaza fa ny fahazoana ekena lehibe toy izany dia voninahitra ho an'ny toerana haleha.
“Ny anarana voatondro ho nosy tsara indrindra eran-tany 2021 atsy Afrika sy Moyen Orient indray dia nahafaly ny toerana kely nalehanay. Mampahery ny indostria amin'ny ankapobeny ny mahafantatra fa ny mpitsidika dia tsy vitan'ny hoe manaiky ny hatsaran-tarehy voajanahary amin'ireo nosintsika fa koa ny zavatra niainana iray manontolo izay mahatonga antsika hanana tokana sy azo antoka fa 'Tontolo Iray hafa.' ”
Ny fanendrena ny toerana voatokana ho an'ny vahiny dia valin'ny fanadihadiana isan-taona notontosain'ny Travel + Leisure, izay ahafahan'ny mpamaky ny magazay fitsangatsanganana any New York manombatombana ny zavatra niainan'izy ireo manerana izao tontolo izao. Ny mpamaky dia mandanja hotely ambony, nosy, tanàna, zotram-pitaterana an-dranomasina, sambo fitsangantsanganana an-tsambo, spaoro ary maro hafa, manome isa ireo nosy amin'ireto toetra manaraka ireto: fisarihana voajanahary sy moron-dranomasina, hetsi-panoherana sy fisakafoanana, trano fisakafoanana sy sakafo, olona ary fitiavana, ary soatoavina ankapobeny. Seychelles mifamatotra amin'ny Nr 24 miaraka amin'i Sri Lanka any amin'ireo nosy ambony indrindra amin'ny magazine manerantany.
Ny fanadihadiana momba ny loka tsara indrindra eran-tany tamin'ity taona ity dia nisokatra tamin'ny fifidianana ny 11 Janoary hatramin'ny 10 Mey 2021, satria nanerana ny fetin'ny COVID-19 ny toerana itodiana manerantany.